Chikamu chekushandisa: Ichi chigadzirwa chakakodzera kuunganidzwa, kutakura uye kuchengetedza hutachiona sampling. Mirayiridzo yekushandiswa: 1. Usati watora sampuli, chengetedza yakakodzera ruzivo rwesampire pane leboel yeiyo sampling tube. 2. Shandisa sampling swab yekuenzanisira kune nasopharynx kusvika pane akasiyana masampuli anodikanwa. 3. Sampling nzira dziri pazasi: a. Nasal swab: Nyoroisa iyo swab musoro mumhino wechipfuva chemumhino, gara kwechinguva uye wozoiburitsa zvishoma, ...
Butterfly Ropa Kuunganidza Tsano
Zvinoenderana nerudzi rwechibatanidza, Iyo inosaswa venous ropa rekuunganidza sindano inogona kuiswa muPen-rudzi uye nyoro-yekubatanidza neropa sindano. Bhatani masaliti ndimambo od kupfava-rinobatanidza ropa sindano. Sipo yekuunganidzira ropa inoshandiswa kuunganidza samples dzeropa panguva yekuongororwa kwechiremba inoumbwa nesingano nebhaa retsono.